Fanafihana fiarabe :: Mpamily kamiao maty novonoin' ny andian- dehilahy • AoRaha
Fanafihana fiarabe Mpamily kamiao maty novonoin’ ny andian- dehilahy
Tsindron’antsy maro no hita tamin’ny vatan’ity mpamily kamiao sy ny mpanampy azy tany amin’ ny lalam-pirenena faha-13, tao amin’ny toerana atao hoe Benelo, tokony ho 45 kilaometatra tsy hahatongavana any Betroka, tamin’ny faran’ny herinandro teo. Efa-dahy mitondra fiara tsy mataho-dalana no voasambotra satria voatondro ho namono azy ireo.
“Nisy olona nanome vaovao ny tobim-paritry ny zandarimaria any Betroka, tamin’ny sabotsy hariva, momba ny fisiana kamiao miloko fotsy nanary zavatra hafahafa tamin’ny gony teo Bemelo. Fatin’olona no hitan’ny fokonolona tao. Nanao sakana avy hatrany ny zandary teo amin’ny telo kilaometatra tsy hiditra ny tanànan’i Betroka. Nijanona lavitra ilay fiara rehefa nahita ireo zandary. Nanatona ny mpitandro filaminana saingy tsy nahita olona intsony fa tsikaritra ho nihosin-drà teo amin’ny toeran’ny mpamily”, hoy ny loharanom-baovao avy any Betroka.
Mbola angom-baovao ihany koa no nahalalan’ny zandary momba ny olona mandeha fiara tsy matahodalana voatonona ho tompon’antoka tamin’ireo vono olona ireo. “Hita tany Ianabinda ilay fiara tsy mataho-dalana, tokony tamin’ny 9 ora alina. Tra-tehaka ny efa-dahy nihosin-drà sy nahatrarana ny antsy feno rà miaraka amin’ny basy poleta iray. Ny ampitson’io vao hitany razan’ilay mpanampy ny mpamily”, hoy hatrany ny fanampimbaovao.
Olana teo amin’ny fanangonana tantely no fototr’ity vono olona ity araka ny fantatra. Nivadika ho fanodinkodinana lelavola dimy tapitrisa izany ary niafara tamin’ny fikasana hangalatra ny kamiao rehefa maty ny mpamily sy ny mpanampy azy.
Vono olona :: Tovovavy hita faty nalevina tany anaty ala
Fakana an-keriny :: Tratra ilay vehivavy mpanampy nangalatra zazakely